စစ်ကျွန်ပညာရေး‌ထောက်ခံလို့ ဇနီးကိုကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ကလေးဝသား ( ခံယူချက်မတူရင် လင်မယားချင်းလည်း မရဘူး ပြတ်တယ်…) - CeleHits
စစ်ကျွန်ပညာရေး‌ထောက်ခံလို့ ဇနီးကိုကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ကလေးဝသား ( ခံယူချက်မတူရင် လင်မယားချင်းလည်း မရဘူး ပြတ်တယ်…)
May 10, 2021 by CeleHits
U Aung Ko Myint အကောင့်ပိုင်ရှင်က ၎င်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ဒီနေ့က အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
ဇနီးမယား အဖြစ်မှ တရားဝင် စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
ကလေးဝမြို့နယ် ဆည်ကြီးရွာအုပ်စု ကင်းရွာနေ
ဦးစံအောင်၊ဒေါ်စိန်ဌေး တို့၏ သမီး ဒေါ်သိမ့်သိမ့်မျိုး(လယ်ပြ/ အ.လ.က ကျောင်းကြီး) သည် စစ်ကျွန်ပညာရေးအား ထောက်ခံအားပေးလျက် ရှိသောကြောင့် ဆက်လက်၍ ဇနီးမယားအဖြစ် မပေါင်းသင်းနိုင်ကြောင်းမိဘ ဆွေမျိုးများ၏ ဖိအားပေးအကြပ်ကိုင်မှု ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု တို့ပေါင်း၍ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စိအာ ထောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးမျိုး ရှင်းပြခဲ့ပါသော်လည်း နားမလည်နိုင်ပဲ ၎င်း အယူအဆကိုသာ ခိုင်မာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့်ကျွန်တော် အောင်ကိုမြင့်သည် ဒေါ်သိမ့်သိမ့်မျိုး အား ဇနီးမယားအဖြစ် ဆက်လက်မပေါင်းသင်းနိုင်ကြောင်းတရားဝင် ကြေညာလိုက်သည်။
( မကျေနပ်သော ဆွေမျိုးများအား သ
က်သေအထောက်အထား ပြည့်စုံစွာဖြင့် တရားရုံးတွင်သာ ရှင်းလင်းပေးလိုကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်)
စစ္ကျြန္ပညာရေး‌ထောက္ခံလို့ ဇနီးကိုကြာရွင်းလိုက္တဲ့ ကေလးဝသား ( ခံယူခ်က္မတူရင် လင္မယားခ်င်းလည်း မရဘူျးပတ္တယ်…)
U Aung Ko Myint အေကာင့္ပိုင်ရွင္က ၎င်းလူမှုကြန်ယက္စာမ်က္နွာတြင် ဒီနေ့က အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
ဇနီးမယား အျဖစ္မွ တရားဝင် စြန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညျာခင်း
ကေလးဝမြို့နယ် ဆည်ကြီးရြာအုပ္စု ကင်းရြာနေ
ဦးစံအောင်၊ဒေါ်စိန်ဌေး တို့၏ သမီး ဒေါ်သိမ့်သိမ့္မ်ိုး(လယ်ျပ/ အ.လ.က ​ကေ်ာင်းကြီး) သည် စစ္ကျြန္ပညာရေးအား ထောက္ခံအားပေးလ်က် ရွိသောကြောင့် ဆက္လက်၍ ဇနီးမယားအျဖစ် မေပါင်းသင်းနိုင်ကြောင်းမိဘ ဆြေမ်ိုးမ်ား၏ ဖိအားပေးအကြပ္ကိုင္မှု ကိုယ္တိုင္ဆန္ဒျပင်ျးပမှု တို့ပေါင်း၍ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင္စိအာ ထောက္ခံချဲ့ခင်ျးဖစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အမ်ိုးမ်ိုး ရွင်ျးပခဲ့ပါသ္လောည်း နားမလည္နိုင္ပဲ ၄င်း အယူအဆကိုသာ ခိုင္မာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသောကြောင့္ကျြန်တော် အောင္ကျိုမင့်သည် ဒေါ်သိမ့်သိမ့္မ်ိုး အား ဇနီးမယားအျဖစ် ဆက္လက္မေပါင်းသင်းနိုင်ကြောင်း
( မေက်နပ်သော ဆြေမ်ိုးမ်ားအား သ
က်သေအေထာက်အထာျးပည့္စုံစျြာဖင့် တရားရုံးတြင်သာ ရွင်းလင်းပေးလိုကြောင်း ​အသိပေးအပ္ပါသည်)
ပြည်သူကို လျှော့တွက်ခဲ့သော ၂၀၁၆ ခုနှစ် က တူရကီ၏ စစ်အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှု..( ဗဟုသုတရရှိရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ )
Categories ထူးထူးခြားခြား Post navigation
တော်လှန်ရေးကာလအလွန်လ တိုင်းပြည် ဘယ်လို ပြန်ထူထောင်မလဲ ဆိုတာကို ပူနေသူများသို. ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေ ပိုချမ်းသာလာမှာ….)
အကိုတယောက်ရဲ့ မေတ္တာ – တစ်ရက်ကို (၁၂)နာရီပဲ အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင် သူရဲ့ကျန်တဲ့အသက်ကို ညီလေးနဲ့အတူမျှဝေပြီး ရှင်သန်ချင်ကြောင်းဖွင့်ဟလာတဲ့ ကိုကို